Barakacayaal codsaday in kaalmo lala soo gaaro oo ay heysato xaalado nololeed | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Barakacayaal codsaday in kaalmo lala soo gaaro oo ay heysato xaalado nololeed
Barakacayaal codsaday in kaalmo lala soo gaaro oo ay heysato xaalado nololeed
Xeerada Daryeel ee Degmada Kaxda waxaa ku nool qoysas ka soo barakacay qaar ka mid ah gobollada dalka abaarta darteed, halkaasi oo ay ka jirto daruufo adag oo xagga nolosha ah.
Waxaa xusid mudan inay jiraan haween umul ah oo qaarkood mataano dhalay, kuwaasi oo aan haysan daryeel caafimaad iyo mid nololeed toona, ayadoo ay usii dheertahay qabaw iyo dhaxanta dushooda ku dhacaysa oo ay usii dheertahay dhibicda roobka oo aysan haysan hooy ay gabaad ka dhigtaan.
Maamulka Degmada Kaxda oo kaa shanaya qaybaha bulshada ayaa waxaa uu hirgaliyay kushiin ay ka cunteeyaan qoysaska barakacayaasha ah, waxaana gabaabsi maraya raashinkii loo karin lahaa qoysaska oo awalba hal waqti heli jiray 24 saac kaddib oo loo kariyo bariis aan iidaan lahayn oo timir korka looga daray.
Hooyooyinka iyo carruurta oo ah dad unugul dhibaatada iyo gaajada ayaa safaf dhaadheer ugu jiray raashinka qaar kood ayaaba waxaa Ka go’ay raashinkii la qaybinayay, waayo waxa la kariyo iyo dadka oo marba marka ka dambaysa si habqan usoo gaaraya xerada ayaan isku dhigmin.
Dadka qaarkood ayaa ah kuwa aan waxba qabsan karin sida kuwa naafada ah iyo kuwa ay nafaqa darida haysato.
Cudurada faafa oo ka dhasha nadaafadda darida ayaa fara ba’an ku haya dadka xeradaas ku nool, sida ay horjoogayaasha xeradaasi inoo sheegeen inta la xaqiijiyay tira dad ah ayaa u geeriyooday cudurka shuban biyoodka, halka kuwa kale ay la jiifaan Xerada Daryeel ee Dagmada Kaxda.
Guddoomiyaha Degmada Kaxda ee Gobolka Banaadir Maxamed Ismaaciil Cabdullaahi oo la hadlay Warbaahinta Qaranka ayaa sheegay in xaaladda nololeed barakacayaasha ay ka sii darayso, isla markaana aysan dadku helin gurmad ku filan, waxaana Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya Guddig gurmad abaaraha heer Qaran ugu baaqay inay iska xilsaaraan sidii Dadkaasi loogu gurman lahaa.
Previous articleWebiga Shabeelle oo fatahaad ka sameeyay deegaanno ka tirsan gobolka Sh/dhexe
Next articleUrurka Xamaas oo aqbashay dhismaha Dowlad Falastiin oo ku salaysan Xudduudii 1967.